Na-ebudata ụbọchị na onu - esi ejide, uru na nsogbu
Ụbọchị na-ekpochapu na onu - iwu na nsonaazụ
Lee anya magburu onwe ya, na-adọta mmasị nke ndị na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị na-enwe mmekọahụ nke afọ dị iche iche. Maka nke a, ha na-anọdụkarị n'ụdị nri ọ bụla ma ọ bụ na-eme ndokwa izu ike maka ahụ - ibudata. Anyị na-agwa anyị ka anyị chọpụta ihe ndị a na-eme ka anyaukwu na-enye.
Ibudata na ogwu dị mma na ihe ọjọọ
Ihe oriri ọ bụla na ọbụna ụbọchị ọnụ na-ebu ọnụ nwere uru na ụkọ ha. Okpokoro mmiri na-ewepu ụbọchị abụghị ihe ọzọ. Nutritionists anaghị akwado ya:
Nye onye ọ bụla nwere nsogbu na akụrụ. Ma ọ bụghị ya, enwere ike ịmalite ọrịa ahụ.
Ahụhụ shuga na-ata ahụhụ. Nbudata dị otú ahụ ga-eme ihe nhụsianya ka ọ dị mma karịa onye ahụ.
Na cholelithiasis .
Ndị na-ekweghị ekwekọ na-adịghị mma, dịka ha ga-eri nri naanị otu ụbọchị.
Otú ọ dị, enwere uru maka nwelite dị otú a:
Nchọpụta nke toxins si n'ahụ.
Ọcha nke eriri afọ gastrointestinal na eriri dị na pulp nke anyụ.
Ihe di n'ime onu nke vitamin A , B, C, iron, potassium na magnesium.
Na-ebudata ụbọchị na okpokoro maka ọnwụ
Ọtụtụ ndị ọkachamara na-ekwu na ibudata na anyụ bụ otu n'ime ihe kachasị dị irè maka onye ọ bụla chọrọ ịkwụsị ibu arọ. Nnukwu beri dị ezigbo ụtọ ma na-aba uru nwere folic acid, nke na-enyere aka mee ka usoro mmezi ahụ na-eme ngwa ngwa na ahụ, nke na-enyere aka ịchọta onye mara mma. Otú ọ dị, ọ bụrụ na enwere ọchịchọ ịkwụsị ibu, ọ dị mkpa ịtụle na na mgbakwunye na anyụ, ọzọ n'ụbọchị, ị pụghị iri ihe ọ bụla ma ghara ịṅụ ya mma.
Maka ibudata na berry na-atọ ụtọ, ị chọrọ 1.5 kilogram nke pulp nke anyụ. Ha kwesiri ka ekewa ha n'onu ise ma obu isii ma kpochapu ubochi. N'otu oge ahụ, ọ dịghị mkpa ka ichere na ngwa ngwa mgbe ụbọchị dị otú ahụ gafere. Usoro a na-adịgide adịgide, ma dị irè. A na-atụ aro ka ị rụọ ọrụ dị otú ahụ na mgbụsị akwụkwọ, mgbe a na-eme ka anyụkwu ahụ bụrụ ihe dị ụtọ, ma ọ bara uru.
Na-ebubata ụbọchị na anyụ na egusi
Mee ka usoro nke ịla n'iyi dị ezigbo ụtọ ga-enyere ọkpụ mmiri-melon ebu ọnụ. Mgbe ọ gasịrị, a ghaghị inwe mmetụta na-enweghị atụ nke ìhè. Onye ọ bụla chọrọ ibudata n'ụzọ dị otú a, ị gaghị ejikọta abụọ delicious tomato. Kwa awa abụọ ọ bụla ị chọrọ iri nri ma ọ bụ anyụ. A na-ekwe ka okpokoro anụ rie yoghurt a na-enweghị ụtọ. Ị nwere ike ịṅụ mmiri ịnweta mmiri.
Weghachite ụbọchị na kefir na anyụ
A na-akpọkwa ụbọchị a na-edozi kefir na-adị irè. Ụbọchị tupu ịchọọ ịzụta anyụ na kewaa ya na otu aka. Nke mbụ n'ime ha nwere ike iji n'oge ụtụtụ. Mgbe awa atọ ọ dị gị mkpa ịṅụ iko bifidokephire. Maka nri ehihie, ị ga-eri akụkụ nke abụọ nke beri bred. N'ehihie ị ga-aṅụ iko yogọt. Ndị na-eri nri na-akwado onye ọ bụla nwere nkume, ma ọ bụ ájá na akụrụ nri ya na ogwu iji nọrọ na bath. N'ihi usoro a, ọ ga-ekwe omume iwepu ihe ndị na-abaghị uru n'ahụ. Tupu ị lakpuo ụra, i kwesịrị ịṅụ iko nke kefir.
Weghachite ụbọchị na anyụ na obi chiiz
Ọ bụrụ na ụbọchị ịbịakọta na okpokoro dị iche iche dị iche iche site na nri ndị ọzọ bara uru, usoro nke ịla n'iyi ga-adịkwu mfe karị. Otu n'ime nhọrọ dị irè maka ibudata bụ iji ogwu na cheese cheese. Ọ dị mkpa ịmara ókè okpokoro na-adị n'ụbọchị nkwụsị. Nutritionists nwere ike ikwu na iji n'ụbọchị 1 n'arọ nke delicious tomato. N'ime mpaghara a, ị ga-agụnye cheese chiri mara mma - gram 400 kwa ụbọchị. A na-ahapụ gị ka ị ṅụọ mmiri na mmiri na-aṅụghị ya. A na-eri efere iche iche site na cheese cheese ma ọ bụ na ya. A na-atụ aro ya na obere akụkụ mgbe enwere agụụ .
Na-ebubata ụbọchị na buckwheat na anyụ
Mgbe ụfọdụ, ọ na-adịghị mma ka a na-ebudata ihe dị na ya. N'ọnọdụ ndị dị otú a, a ga-ejikwa ihe ndị ọzọ na-emepụta ihe ndị ọzọ na-emepụta ihe ndị ọzọ bara uru. Otu n'ime ihe kachasị dị irè bụ nchikota nke anyụ na buckwheat. Okwesiri ihe na-atọ ụtọ ka ekwesighi ka ekwenyeghi ya ma o di mma iji nkpuru ndi a na-achichaghi ya mgbe ị na-akwadebe. N'ime ụbọchị dum, ọ dị gị mkpa iri 200-300 grams nke porridge. A na-ekwe ka okpuru mmiri rie 0.5-1 n'arọ. N'ụbọchị a ịkwesịrị ịṅụ ihe ruru lita 2. A na-ewere ụbọchị dị otú ahụ na -eme ihe na -emeghachi ugboro ugboro dị irè.
Nri na afọ ọnya afọ
Olee otú Nastya Kamensky dịruru ná njọ?
Nri "Scaffold" - menu
Olga's Bread Diet Raz - menu maka izu
Nri maka cancer
Nri maka imeju
Nri na ihe ọṅụṅụ tomato
Dika Maggi - menu maka kwa ubochi
Kedu ka Angelina Jolie si gbafu ibu?
Nri nri ihe - nri kachasị mma
Ntụgharị uche Osho maka Kwa Ụbọchị
Ụlọ nke Saadis
Akpụkpọ ụkwụ ọkụ
Goroshnitsa na multivark
Charlotte na ude mmiri
Kedu ka m ga-agwa mama m na m nwere oge?
Kedu ngwakọta kacha mma maka oriri a na-eri nri?
Onye na-eme ihe nkiri Hugh Grant ga-abụ nna ... oge nke anọ!
Stoleta n'oge ime
Snowflakes si na agwa
Kedu uwe ị ga-eyi ka ụmụ nwanyị zuru oke?
Ngwurugwu siri ike - na-eto site na osisi
Bows na jeans
Kedu afọ ole ka ọ ka mma iji sterilaiz pusi?
Biography nke Gina Lollobrigida